Ihe Omume nke Ubochi nke Ubochi: O yiri Jesus | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Nsọpụrụ ụbọchị nke ụbọchị: Na-ele anya dị ka Jizọs
Ọ nọ na-enwe ọganihu n'ihu ụmụ mmadụ. Kama itunanya uwa nile site na ebube di ebube, o choro itolite nke nta nke nta dika nke chi ọbụbọ, na nime ezi ihe nlere anya ndi madu huru omume oma na abawanye mgbe nile. Mee ezi ihe, ka St. Gregory na-ekwu, ọbụlagodi n'ihu ọha, iji kpalie ndị ọzọ i imitateomi gị na ito Onyenwe anyị n'ime gị; ma ụwa dị mwute ikwu na-ahụ ihe ọjọọ anyị, enweghi ndidi, iwe, ikpe na-ezighi ezi, na ikekwe mgbe anyị omume ọma ... Ọ bụghị gị ikpe?
Jizọs nwere ọganihu n'ihu. Ọ baghị uru, bido nke ọma ma jigide nwa oge ma ọ bụrụ na ị daa mba obi ma nnọgidesi ike gị dara ... Jizọs, na ngosipụta nke sayensị, ịdị mma, ọrụ ebere, n'ịchụ onwe ya n'àjà, na nke ọma onye ọ bụla, ọ gara n'ihu n'ihu ruo mgbe ọ nwụrụ. Gịnị mere i ji agbanwe agbanwe nke ọma? Ike agwụla gị ịrị ugwu dị elu nke omume ọma; nzọụkwụ abụọ ọzọ, ma ị ga-adị n'elu, obi ụtọ ruo mgbe ebighị ebi.
Ihe oyiyi nke Jizọs gosipụtara obi ya. E gosipụtara uwe ime nwoke ahụ site n'ọdịdị ihu ya; usoro na nkwekorita nke semblant na-ese ihe obi ya bu. Okwu uto nke Jisos kpughere obi ya di nma; ike na-agwụ ike ọrụ kwuru banyere ịnụ ọkụ n'obi ya; anya na-enwu enwu chọpụtara ọkụ nke ime ịhụnanya. Ọrịa anyị na-apụ na mpụga, oyi anyị anaghị ekpughe ọgbaghara na ịdị mma nke obi anyị?
OMUME. - Gụa Gloria Patri atọ, ma bụrụ ezigbo ihe atụ maka ihunanya Jizọs
Ekpere maka okwu kwesiri ekwenti
Nsọpụrụ Chineke nke Na-enyere Gị Aka Ibi Ndụ Obi !tọ!
Ura nye St. Joseph: ekpere nke n’enyere aka!
Ekpere Saint Ambrose: Nsọpụrụ nye Jizọs Kraịst!
Ntughari uche kwa ụbọchị: kpee ekpere maka ịdị n'otu
Tụkwasị Chineke obi, jiri Akwụkwọ Nsọ kpee ekpere